Amazon Prime ee ardayda, 3 bilood bilaash ah iyo 18 euro sanadkii | Wararka Gadget
Amazon Prime ee ardayda, 3 bilood bilaash ah iyo 18 euro sanadkii
Amazon waxay sii wadaa inay si xoogan ugu sharadto faafitaanka adeeggeeda Ra'iisul-wasaaraha, oo aan ku jirin oo keliya faa'iidooyin taxane ah marka la eego qiimaha iyo rarka 24-saac, laakiin sidoo kale waxay na siisaa muusig wanaagsan iyo buugga maqalka maqalka, helitaanka wararka Twitch iyo waxyaabo kaloo badan. Munaasabaddan, Amazon waxay soo bandhigeysaa dalab loogu talagalay ardayda wax ka beddeli kara diiwaangelintooda, 90 maalmood oo tijaabo ah oo bilaash ah iyo € 18 sanadkiiba oo loogu talagalay rukunka koowaad. Tani waa waxa kaliya ee qorshaha cusub ee ardayda Amazon ay bixiso oo noqda mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo adeegyada iskutallaabta ee suuqa qiimahaan.
Adeeggan ayaa loogu magac daray Prime Student, muddo 90 maalmood ah oo tijaabo ah iyadoo lala kaashanayo Microsoft Surface. Muddada tijaabada kadib, ku raaxayso rukun qiimo dhimis ah oo loo sameeyay Prime Student oo ah EUR 18,00 / sanadkii, ilaa aad ka qalin jabineyso ama ugu badnaan 4 sano. Waad joojin kartaa daqiiqad kasta. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa talaabooyinka qaarkood oo aan aad u murugsanayn, oo xusuusnow inay ku jiraan waxaas oo dhan:
Bixinta ugu horeysa ee 24 saacadood oo bilaash ah markasta
Ku-xigeenka Ra'iisul Wasaaraha
Helitaanka mudnaanta ee dalabyada flash
Sida looqoro Amazon Prime Student
Si aad uqorto Amazon Prime Student waa inaad gujisaa xiriirka soo socda ka dibna waxaad si fudud ugu baahnaan doontaa inaad u isticmaasho koontada emaylka ardaygaaga inaad iska qorto. Xisaabaadyadan ayaa ah kuwa kulleejadaada ama jaamacaddaada, kuwaas oo inta badan ku xiran adeegyadooda. Si fudud u isticmaalida koontada emaylka ardaygan markaad is-qorto, nidaamku wuxuu ogaan doonaa inaad u-qalanto inaad isticmaasho Amazon Prime Student. Xaqiiqdu waxay tahay inay tahay qiimo dumis, wax ka yar euro bil kasta waxaad heli doontaa maraakiib bilaash ah iyo fiidiyoowga Amazon Prime, kama fikiri karo dalab ka xiiso badan xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Amazon » Amazon Prime ee ardayda, 3 bilood bilaash ah iyo 18 euro sanadkii
Portal, oo ah afhayeenka kamaradda Facebook, ayaa hadda laga heli karaa Spain
GXT 540C Yula camo edition by Trust Gaming: Ciyaarta ugu badan ee suuqa laga helo